Ihe kachasị mma 24 ihe eji echepụta echiche maka nwoke na nwanyi - echiche echiche nke ime ihe
Ihe kachasị mma 24 ihe eji eche echiche nke nwoke na nwanyi
Otu igbu egbugbere ọnụ bụ otu n'ime atụmatụ aghụghọ kachasị mma ị nwere ike ịhụ na onye ọ bụla. Ọ dị obere na mara mma ma na-enye ọtụtụ nkwanye ùgwù. Ọ bụrụ na ị maghị ụdị ihe ị ga-eme n'ahụ gị, kpebie ụdị ụdị ihe ị na-achọ.
1. Ụdị na-egbu egbu na ahụ
2. Ụdị Ọkpụkpọ Ndị Mmadụ
Achọpụta oge mbụ nke #vintage tattoo bụ nnukwu ihe mmeri na ndụ gị; ọ dịghị onye na-ahụ gị ma ghara ile anya n'azụ gị.
3. Ogbugba ogbugba ojoo
A na-ahụ ụdị ụdị nke a na-ahụ maka ọkpụkpụ a na-akọ n'akụkọ ifo a na-ahụ anya n'ahụ ndị ikom na ndị inyom. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ihe pụrụ iche, gaa maka nke ọ bụla.
4. Akpanwụ egbugbere ọnụ
Inweta egbugbere ọnụ na-egbu egbu bụ ihe na-ewe oge dị ukwuu. Ị ga-enwe ndidi ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche igbu egbugbere ọnụ.
5. Achịcha na-adịghị egbuke egbuke
Na mbido ihe mgbochi a na-enwe n'oge ochie, nke mmadụ ole na ole nwere ike inweta. Taa, #design abụghị otu na onye ọ bụla nwere ike inweta ya n'enweghị mmetụta.
6. Obere egbugbere ọnụ dị mfe
Ebumnuche nke egbugbere mmanya gị dị mfe aghọwo ezigbo mma. Ekele maka ndị na-egbu egbugbu bụ ndị na-echere gị mgbe niile maka gị.
7. Ogbugbu a na-agbanye mmanya dị iche iche
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ siri ike ịmepụta na ịbịaru, ịma mma nke na-eso ya bụ ihe naanị onye na-ahụ ihe nwere ike imeta.
8. Di na nwunye na-egbu egbu
Di na nwunye nwere ohere nke inwe ihe ndi mara mma dika nke a. Kedu ka ị ga-esi hụ di na nwunye a bụ ndị meworo atụmatụ ha na ọkwa ọzọ?
9. Ogbugbu mmiri oyi
Mgbe ị na-achọ ebe ị ga-egbu egbugbere ọnụ gị, ị kwesịrị ị na-ekwenye mgbe niile na ịchọrọ ihe niile ịchọrọ ịchọta ihe eji egbu egbu na-adị mma maka gị.
10. Ogbugbu egbugbere ọnụ mara mma
Ọ bụrụ na ị hụbeghị ebe a na-adọrọ mmasị na-egbuke egbuke egbugbere ọnụ, ị ga-achọ ezigbo ụlọ ọrụ ebe ị nwere ike ị nwere ike imezi ụdị ụdị a.
11. Nnukwu egbugbere ọnụ
Ụlọ ihe ọ bụla nwere ike ịnwe ebe pụrụ iche ebe ị nwere ike inweta ụdị ụdị mmanya a. Mgbe ị na-eche maka ntụpọ ebe ị nwere ike ịnwe ya na ahụ gị, lelee anya mmiri a na-emepụta na ịhazi gị.
12. Egwu egbugbere ọnụ foto
Ọbụna ihe osise nwere ike ịka mma karịa ụdị egbu egbu. Mgbe ị nwere egbu egbu ị nwere ike ịchọrọ gị eserese, ị nọ n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị
13. Okpukpo aru nke ocha
O nwere ike were ọtụtụ ụbọchị ma ọ bụ ọbụna izu iji nwee ụdị egbugbere ọnụ zuru ezu dị ka nke a na mgbe ị dị njikere na imewe gị, onye ọ bụla nwere obi ụtọ dị ukwuu.
14. Ogbugbu oge ochie
15. Egbu egbugbu ezinụlọ
E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ igbu egbugbere ọnụ nke ga-enyere gị aka na ndị na-egbu egbugbu ezinụlọ. Ọnụ ego ị nweta ya nwere ike ghara ịdị oke ọnụ dị ka ọtụtụ ndị mmadụ pụrụ iche. Ikpe nwere ike ime ka ị kwenye.
16. Egbu egbugbu mara mma
Nwa nwanyi a na-egbu egbu egbu bụ ihe naanị ị nwere ike ịhụ n'anya. Ọ mara mma ma dị ịtụnanya.
17. Na-achọ mmanya na-egbu egbu
Onye ọ bụla nwere ihe ọ chọrọ mgbe ọ na-abịakwute mkpịsị mmanya. Maka ndị chọrọ ịpụ apụ na njide ha, ịhụnanya ịṅụ mmanya gbara gburu gburu bụ otu n'ime atụmatụ ha nwere ike iji.
18. Ogbugbu mmanya na-egbu egbu
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na e nwere ụdị dị iche iche nke vineji, egbe ndị na-egbu egbu na-egbu egbu aghọwo ndị a ma ama na gburugburu ụwa. Ihe dị iche dị jụụ na atụmatụ ndị ahụ bụ naanị ihe òtù ndị òtù na-enwe ike imetụta.
19. Nnukwu egbu egbu
Ịchọta ihe eji egbu egbu nke ọma maka gị nwere ike igosi ule dị egwu. Nke a bụ n'ihi nkọwa nkọwa na ntinye nsị nke ịchọtara mgbe ị na-achọ nhazi imecha nke ọma.
20. Nwa nwanyị na-egbu egbu
Ọmarịcha mkpịsị aka ochie na-achọ nkà nke onye tattooist. Mgbe ị dị njikere maka igbu egbugbere ọnụ, ọ dị gị mkpa ịnọnyere onye na-egbu egbu gị ma mee ndokwa kwesịrị ekwesị nke ga-eme ka ọdịiche dị iche dịrị gị na njedebe nke ụbọchị ahụ.
21. Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ stampụ
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-abata n'ụdị dị iche iche na mkpa. Ihe ntanetịcha stampụ nwere ike ịnweta na ebe ndị na - adịghị adị ma ọ bụrụ na ị na - achọ igbu egbugbu na - aga n'ihu maka ya.
22. Egbu egbugbu ezinụlọ
Egbu egbugbu nke ezinụlọ aghọwo otu n'ime ihe kachasị mma iji tụnyere ntaneti ndị ọzọ. Ihe kpatara ya bụ n'ihi ọtụtụ agbụ na mmetụta nke egbu egbu.
23. Achịcha na-egbuke egbuke nke ụmụ amaala
24. Ntughari onu ogugu ndi mmadu
Ịgbu egbu a na-amasị gị? Ọ bụ naanị ndị na-achọ ntanetị dị egwu nke nwere ike ịjụ maka nke a. A naghị ahapụ ndị inyom mgbe ha na-enwe egbu egbu a mara mma.
di na nwunyeegbu egbumma tattoosechiche egbugbuaka akaudara okooko osisiarịlịka arịlịkaọnwa tattoosenyí egbu egbumehndi imewekoi ika tattooegbugbu maka ụmụ agbọghọazụ azụAnkle Tattoosagbụrụ eboegbu egbu okpuEgwu ugoakwara obiNtuba ntughariakpị akpịaka mma akana-adọ aka mmaỤdị ekpomkpannụnụegbu egbu diamondngwusi pusiegbu egbu hennana-egbu egbuegbu egbu ebighi ebiụkwụ akaegbu egbu mmiriegbugbu egbugbuUche obiakara ntụpọrip tattoosụmụnne mgbuima ima mmaenyi kacha mma enyizodiac akara akaraaka akandị mmụọ ozin'olu oluokpueze okpuezeegbu egbu osisi lotusegbu egbu maka ụmụ nwokeọdụm ọdụmegbu egbu egbuegwu egwundị na-egbuke egbukeGeometric Tattoos